Mg Thant: November 2011
စင်ကာပူက နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ စတုတ္ထမြောက် အိုင်တီရှိုး (Sitex 2011)နှင့် အခြား ပရိုမိုးရှင်းများ
Date - 24th to 27th November 2011
Venue - Singapore Expo Hall 4B,5& 6
Official Website - http://www.sitex.com.sg/index.html
For Price & Brochure - http://bootstrike.com/itfairsg/sitex2011/price-list/
စင်ကာပူက နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ စတုတ္ထမြောက် အိုင်တီရှိုးဖြစ်ပြီး Singapore Expo မှာ ကျင်းပတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အိုင်တီရှိုးပါ။ ကွန်ပြူတာ၊ လပ်တော့၊ ဖုန်း၊ တီဗွီ၊ Tablet၊ ကင်မရာ စတဲ့ စတဲ့ Gadget တွေ အပြိုင်အဆိုင် ဈေးချ၊ လက်ဆောင်တွေ၊ အပိုပစ္စည်းတွေ အပြိုင်အဆိုင် ပေးမယ့်ပွဲပါ။ ဟဲဟဲ အသားကုန် တန်းစီဖို့လည်း ပြင်ထားပေါ့။
ဒီနေ့ကနေစပြီး ၂၇နိုဝင်ဘာထိ Suntec City မှာ BookFest စာအုပ်ရောင်းပွဲတော် ရှိပါမယ်။ စာအုပ်ဆိုင်ပေါင်းများစွာက စာအုပ်ရောင်းရုံတင် မဟုတ်ဘဲ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က စာရေးဆရာတစ်ချို့လည်း ဟောပြောဖို့ ရှိပါတယ်တဲ့။
Official Website - http://www.bookfestsingapore.com/index.htm
နောက်ဆုံး အသိပေးချင်တာကတော့ မနက်ဖြန် စနေနေ့က စပြီး စင်ကာပူမှာ ခရစ်စမတ်အတွက် မီးစထွန်းပါတော့မယ်တဲ့၊ Orchard, Marina Bay, Harbourfront and Sentosa တို့မှာပါ။ အောချတ်မှာ Charity အတွက် ၇နာရီခွဲမှာ ဖယောင်းတိုင် (အတု ထင်တယ်) ထွန်းမယ့် အစီအစဉ်ရှိတယ်။ တစ်တိုင်ထွန်းရင် တစ်ဒေါ်လာလှူတာနဲ့ ညီတယ်ဆိုလား သိပ်တော့နားမလည်ပါ။ ပါဝင်ချင်သူများ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ချင်သူများ မနက်ဖြစ် ၇နာခွဲ သွားရောက်နိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်။
Light Up Beyond the Light-Up
For the first time at the Switch-On Ceremony on Saturday 19 November, Singaporeans and tourists will be able to join in the magical moment through ORBA’s charity initiative "Light Up Beyond the Light-Up". This special effort, held in collaboration with Celebrate Christmas In Singapore (CISS), will see ORBA donating S$1 to Community Chest for every CCIS Candle lit.
Thousands of CCIS Candles lining the street from Ngee Ann City Civic Plaza towards Mandarin Gallery will illuminate Orchard Road and add to the charming Christmas ambience. Members of the public can participate in this momentous occasion by approaching any CCIS volunteer dressed in red foracandle outside Ngee Ann City at 7:30pm. (Ref: http://www.orchardroad.org/beyond_light-up/)
The contents providing on this post are just for information sharing purpose only. I am not affiliated with any sales or promotion companies above. The information could be from unreliable sources, incomplete, inaccurate and changed or altered anytime without notice. I will not be responsible on any lost or damages happen to you concerning above information All logos, posters and graphical contents are copyright of their respective owners and I do not own them.
Facebook, Email, Text Messages, Phone ပေါ်က ချစ်မှုရေးရာ အခြေအနေများ
ယနေ့ခေတ် လူတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြ၊ ပြုလုပ်နေကြ အလုပ်တွေအပေါ်မှာ ဖေ့ဘွတ်တို့၊ တွစ်တာတို့ စတဲ့ အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေ၊ ဖုန်းပေါ်ကပို့တဲ့ မက်ဆေ့တွေ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းပြောတာ စတာတွေဟာ တော်တော်လေး လွှမ်းမိုးလာနေတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ အဲဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀ထဲက အရေးပါတဲ့ ချစ်မှုရေးရာတွေမှာလဲ ဒီခေတ်သစ် ဆက်သွယ်ရေးတွေက တော်တော်လေး နေရာယူလာတာလဲ သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဥပမာ ဆိုပါစို့.. တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စပြီး စိတ်ဝင်စားမိကြရင် အရင်ဆုံး ဖုန်းနံပါတ်တွေ ဖလှယ်ကြတယ်။ စစချင်း ဖုန်းမပြောရဲသေးရင် မက်ဆေ့နဲ့ အချင်းချင်း စကားတွေ ဖလှယ်ကြ၊ နောက်ကြတော့ ဖုန်းတွေခေါ်ပြီး ပြောကြမယ် အဲနောက်ဆင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဂျီတော့တို့ဘာတို့ကနေတဆင့် ပြောကြမယ်။ နောက်ဆုံး ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားရင်၊ လက်ထပ်ပြီးသွားကြရင်၊ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ စတေးတပ်လေးတွေ ပြောင်းကြမယ်။ ပြောနေရင်သာ ကြာဦးမယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ကြတော့ ဒီထက် မြန်နေဦးမယ်။
ဒါကတော့ အဆင်ပြေနေရင်ပေါ့။ အဆင်မပြေကြလို့ သမီးရည်းစား ဘ၀မှာ ဖြစ်ဖြစ် ပြတ်စဲကြရင်ကော နှုတ်နဲ့ပြောလို့ အဆင်မပြေရင် ဖုန်းမက်ဆေ့လေးတွေ အီးမေးလ်တွေနဲ့ 'ဒီဘ၀တော့ ဒီမျှ' အဲလေ အဲလို တွေနဲ့ ပြတ်စဲကြရော ကဲဘယ်လောက် လွယ်ကူလိုက်သလဲ။
ဒါပေမယ့်လည်း အွန်လိုင်းဆိုတာက လူတိုင်းလူတိုင်း အချိန်ပြည့်သုံးနိုင်ကြသေးတာ မဟုတ်တော့ တစ်ချို့တွေက ဒီလိုနည်းတွေ သုံးပြီး အလုပ်ဖြစ်ကြပေမယ့် တစ်ချို့တွေကတော့ လမ်းရိုးကြီးအတိုင်းပဲ သွားနေတုန်းပဲပေါ့။
ဒါကို အရှိကို အရှိအတိုင်း မထားဘဲ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် lab42 ဆိုတဲ့ မားကက်တင်း အုပ်စုက ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ လူတွေက ဒီအွန်လိုင်းလောကမှာ ခရီးတွေ ရောက်နေကြလဲ... ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းက လမ်ရိုးကြီးအတိုင်းပဲ လျှောက်နေကြလဲဆိုတာကို အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူ ၅၅၀ခန့်ကို မေးမြန်းပြီး စာရင်းပြုစုလိုက်ပါသတဲ့။ ပြီးတော့ အားလုံးကို ခြုံငုံပြီး အချိုးချကြည့်လိုက်တော့ အောက်ဆုံးက ပုံအတိုင်း ထွက်လာပါသတဲ့....
ကဲ... သူတို့တွေရဲ့ မေမြန်းစုံစမ်းပြီး စာရင်းပြုစုထားတာ တစ်ချို့ကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်
Text Message, Email, Phone ပေါ်ကနေ ပြတ်စဲခဲ့ကြဖူးသလား ဆိုတာကို ၃၃ရာခိုင်နှုန်းက ပြတ်စဲဖူးကြပြီး ၆၇ရာခိုင်နှုန်းက မပြတ်ဖူးပါဘူးတဲ့။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ပြတ်စဲကြဖို့ကော အစီအစဉ်ရှိလားဆိုတာကို ၄၀ရာခိုင်နှုန်းက ရှိတယ်တဲ့ ၆၀ရာခိုင်နှုန်းက မရှိဘူးတဲ့... ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင် မော်ဒန်နည်းတွေ သုံးတာရာခိုင်နှုန်း နည်းနေသေးတာပေါ့။ ဟဲဟဲ ဆက်ရေးနေရင် လက်ညောင်း အဲလေ စာရှည်သွားမယ်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို အောက်ကပုံမှာပဲ ကြည့်တော့နော်။ ပြီး အဲထဲမှာ ငါရောပါလားဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ပေါ့။ :)
စင်ကာပူ ပရိုမိုးရှင်းများ - Uniqlo Treat-in Store This Week Only From 9.90$
I love Uniqlo so I share it :P
Uniqlo မှာ တခါတခါ တော်တော်တန်တန်ရာရာလေးတွေ ရတတ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ၄၉ ကျပ်လောက် ရှိတဲ့ အင်္ကျီကို ၂၉ ကျပ်နဲ့ ဟိုးတစ်ခါက ဂျင်းဘောင်းဘီ တစ်ထည်ကို ၁၉ ကျပ်နဲ့ ရဖူးတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပေါ့...